किन बहिष्कार गर्‍याे एमालेले सर्वदलीय बैठक ? अरू को-को जाँदैछन् ?
काठमाडौं / संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गरेपनि संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दल भने सहभागी हुने भएका छन् । एमालेले आफूले हटाएका १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मार्ग प्रसस्त नगरेसम्म संसद् गतिरोधलाई लिएर डाकिएका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने जनाएको छ ।
एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता सहभागी भएर संसद गतिरोध अन्त्यका लागि गरिने छलफलको कुनै औचित्य नभएकाले सहभागी नहुने बताए । उनले सभामुखसमेत यो प्रकरणमा दोषी रहेकाे भन्दै सभामुखले डाकेको छलफल पनि यसअघि बहिष्कार गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘विगतमा सभामुखले डाकेको बैठकमा पनि गएनौँ, अहिले संसद् चलाउने विषयमा हुने भनिएको छलफलमा पनि हाम्रो सहभागिता रहँदैन ।’